Cismaan loo heysto dilal kufsi tahriibi iyo dirdil oo talyaaniga lagu maxkamadeynayo | Somalisan.com
Home Afsomali Cismaan loo heysto dilal kufsi tahriibi iyo dirdil oo talyaaniga lagu...
Cismaan loo heysto dilal kufsi tahriibi iyo dirdil oo talyaaniga lagu maxkamadeynayo
Maanta oo Jimco ah ayaa lagu wadaa in Maxkamad lagu soo taago Cismaan Maxamuud oo ah 22-sano jir u dhashay Soomaali, kadib markii horey loogu eedeeyay in uu la shaqeyn jiray Kooxaha dadka Tahriibiya.
Eedeyesane Cismaan Maxamuud ayaa Dalka Talyaaniga waxa uu ku galay qaab Qaxootinimo ah bilowgii bishii September ee sannadkii hore.
Maxkamadda ayaa maanta su’aalo weydiin doonta Cismaan Maxamuud, waxaana Garsoorayaasha Maxkamada qaarkood ay sheegeen in dambiga Cismaan uu yahay mid culus, sidaasi darteedna xukunkiisa uu ahaan doono mid aan sahlaneyn
26-kii September ayaa lagu qabtay Xero ku taalla magaaladda Milan, kadib, markii ay aqoonsdeen dadkii Dhibanayaasha ee uu ku soo waxyeeleeyey gudaha dalka Libya, waxaana loo heystaa dilka 4 Tahriibayaal, Kufsi wadareed, Jir dil iyo Afduub.
Haween Soomaali ah ayaa u sheegay Baarayaasha Talyaaniga inuu kufsaday Eedeysanahaasi oo ka tirsanaa Kooxda Ma-gefayaasha Liibiya ee Tahriibayaasha ku tacdiya, sidoo kalena uu ku amray in ay bixiyaan Lacago Madax furasho ah.
Dalalka caalamka qaarkood waxaa danbiyo kala duwan ugu xiran dad somaliyeed oo cadaalo daro tirsanaya kuwaa oo aan laheyn cid udacwooto ama damiin u noqoto.
Dhinaca kale, Madaxa Baarayaasha Dembiyadda ee magaalladda Milan ee dalka Talyaaniga, Ilda Boccassini waxay tilmaamtay in Eedeysanahaasi hororka ah aqoonsadeen ugu yaraan 10 Markhaati oo kala duwan.
Previous articleAqriso liiska magacyada u sharaxan gudoonka aqalka sare
Next articleWar deg deg ah burhaan iimaan sharma,arke oo ka ….
Gabley Shimbirta maanta Caalamkaa Muslimkow Igula Ciida Caafimaadee Cawada Ciid wanaagsan waayee ilaahow...
Somalisan News - May 24, 2020
Madaxweyne Xasan Sheikh oo Kismaayo ciidamo tababar ugu soo xirey ( DAAWO SAWIRADA )
Ciidamada Midowga Afrika ee AMISOM oo gacan ka siinayso maamul Goboleyda la dagaalanka...
Somalisan News - March 14, 2018
Villa Somalia oo War ka soo saartay kulanka Saddex geesoodka ah ee ka furmaya...